मपविश्वविद्यालय स्ववियु निर्वाचनको मत गणना रोकियो, धादली भएको पुष्टी भएको भन्दै क्रान्तिकारीद्वारा बहिष्कार – Enayanepal.com
मपविश्वविद्यालय स्ववियु निर्वाचनको मत गणना रोकियो, धादली भएको पुष्टी भएको भन्दै क्रान्तिकारीद्वारा बहिष्कार
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु र निर्वाचन समितिले सूचना दिन मानेन ।
सुर्खेत, भदौ १४ ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतमा पहिलो पटक भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा आएर अबरुद्ध भएको छ ।
खसेको मत भन्दा बढी मत भेटिएपछि निर्वाचनमा धादली भएको भन्दै अखिल (क्रान्तिकारी) ले विरोध गरेपछि मत गणना अबरुद्ध भएको हो । मत पत्र बढी भेटिएपछि धादली भएको भन्दै क्रान्तिकारीले मतपत्र च्यातेको छ ।
मतपत्र नै च्यातिएपछि मतगणना रोकिएको स्रोतको भनाई छ । निर्वाचनको दिन मात्रै विश्वविद्यालयबाट एक सय बढी फर्जि मतदाता परिचय पत्र बनाएर मतदान भएको क्रान्तिकारीले आरोप लगाएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म विवाद भएपछि मतगणना सुरु हुन सकेको छैन । मत परिणाम अनुसार नेविसंघका झक्क शाहीले अध्यक्षमा क्रान्तिकारीका राजेन्द्र बुढालाई २५÷३० को दरले पछि पारेका थिए ।
निर्वाचनको अघिल्लो दिन मतदाता विद्यार्थीहरुको परिचय पत्र वितरण गरिएको थियो र अरु लिन नआएकाहरुको परिचय पत्रलाई सिलबन्दी गरेर राखिएको थियो । त्यसअनुसार १ सय ५३ जना विद्यार्थीहरु परिचय पत्र लिन आएका थिएनन । तर, निर्वाचनकै दिन सिल गरेर राखिएका परिचयपत्र समेत वितरण गरेको पाइएकाले निर्वाचनमा धाँधली भएको पुष्टि हुने क्रान्तिकारीका अध्यक्षका पदका उम्मेदवार राजेन्द्र बुढाले बताए ।
क्रान्तिकारीले धाँधली छानविन गर्न माग गरेको छ । छानविन नभएसम्म मतगणना अघि बढाउन नदिने र अहिलेसम्मको परिणाम नस्वीकार्ने उसको अडान छ । तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु सञ्चार माध्ययमलाई प्रतिक्रिया दिन मानिरहेका छैनन ।
हामीले सम्पर्क गर्दा उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र कोइरालाको सम्पर्क नम्वर ९८५१११११८० र रजिष्टार डाक्टर महेन्द्र मल्लको सम्पर्क नम्वर ९८५८०५२८४४ फरवार्ड गरेर सम्पर्क हुन नसक्ने बनाइएको छ भने सूचना अधिकारी विष्णु खड्काको सम्पर्क नम्वर ९८५८०५८४११ बन्द गरेर राखिएको छ । यस्तै निर्वाचन समितिका संयोजक अनन्दराज घिमिरेको सम्पर्क नम्वर ९८५१११२३२४ पनि फरवार्ड गरिएको छ भने निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव आनन्द प्रसाद सुवेदीले फोन उठाएनन् ।
अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले विश्वविद्यालयले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित निर्वाचनको दिन नै १ सउ ५३ मतदाता परिचय पत्र बनाएर एकलौटी नेविसंघलाई मतदान गराएकोले निर्वाचन बहिष्कार गरिएको बताएका छन् । पहिलो पटक भएको स्ववियु निर्वाचनमा फर्जि मत हालेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले नै किर्तिमानी गरेको भन्दै उनले यो स्वीकार नगर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्र कोइराला र रजिष्टार डा. महेन्द्रकुमार मल्लको मिलेमतोमा चुनावमा धाँदली भएको बताएका छन् ।
यता निर्वाचन समितिका संयोजक अनन्तराज घिमिरेले भने निर्वाचनको मतगणना मै विवाद देखिएपछि मोवाई अफ गरेका छन् । यस्तै सदस्य सचिव आनन्द सुवेदीलाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् । स्रोतका अनुसार निर्वाचन समितिका संयोजक घिमिरेलाई रजिष्ट्रार मल्लले जसरी पनि नेविसंघलाई निर्वाचन जिताउनुपर्छ भन्ने दवाव आएको छ ।
निर्वाचन समितिका अनुसार बुथ नं. १ अर्थात व्यवस्थापना संकायबाट पाँच सय ८६ मत खसेको छ । यस्तै मानविकि र शिक्षा संकायका लागि निर्माण गरिएको बुथ नं. २ बाट चार सय ४४ र इनिजनियरिङ, विज्ञान र शिक्षा शास्त्र संकायका लागि निर्माण भएको बुथ नं. ३ मा चार सय ५० मत खसेको थियो । मत गणना आइतबार रातीदेखि सुरु गरिएको थियो ।
त्रिविले मिश्रित प्रणालीमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेपनि कार्यान्वयन नगरेकाबेला मप विश्वविद्यालयले भने मिश्रित प्रणालीमै निर्वाचन गराउन लागेको छ । यो प्रणाली अनुसार अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष र सात जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छनौट हुँदैछन । जसका लागि विभिन्न ८ संगठनबाट ६९ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । बाँकी पदमा संठनले प्राप्त गरेको मतको आधारमा छनौट गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अखिल (क्रान्तिकारी), नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्वविय र नेपाली काँग्रेसको नेपाल विद्यार्थी संघले मात्रै प्रत्यक्षतर्फका सबै १० सिटमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी) बाट अध्यक्षमा राजेन्द्र बुढा, सचिवमा रवि केसी र कोषाध्यक्षमा जानकी रेग्मी तथा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघबाट अध्यक्षमा झक्कबहादुर शाही, सचिवमा सन्तोषकुमार उपाध्याय र कोषाध्यक्षमा सुशील भट्टराईले उम्मेदवारी दिएका छ भने अखिलबाट अध्यक्षमा प्रभात पोख्रेल सचिवमा भरत शाही र कोषाध्यक्षमा अनु आकुराले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
अखिल (क्रान्तिकारी) बाट अध्यक्षमा भीमबहादुर कठायत र कोषाध्यक्षमा शुद्धधन रोकामगर उम्मेदवार बनेका छन भने राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनबाट आदित्यराज उपाध्यायले अध्यक्ष, नवराज गिरीले सचिव र गणेश थापाले कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन ।
औपचारिक घोषणा नभएपछि सचिवमा भरत शाही अनेरास्ववियुबाट अगाडि देखिएका थिए भने अरु सबैमा नेविसंले अग्रता लिएको थियो ।